ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ › အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန
NUG ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ MOIC ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျုိးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) မှ ခန့်အပ်ထားသော ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အဖြစ်တာဝန်ရှိသူဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဌာနများအားလုံးသည် လက်ရှိအခြေအနေလိုအပ်ချက်များ၊ မူဝါဒများ၊ အဓိကအချက်များနှင့် အဓိ က အားဖြင့် အစည်းအဝေးများ၊ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအစိုးရနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိသူများအနေဖြင့် လှုပ်ရှားမှု၊ လိုအပ်ချက်များ၊ မူဝါဒများ၊ အပတ်စဥ်အစီရင်ခံစာများကို လက်ရှိအခြေ အနေအတိုင်းတင်ပြရန် ပူးပေါင်းပါဝင်ရမည်။
MOIC ဌာန ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး | ဒေါက်တာဆာဆာ
The Chief of Staff is appointed by the Union Minister with approval from the Parliment to oversee operations and liason between the various departments and the office of the Union Minister. The COS isasenior Ministry cabinet member and may represent the Union Minister when necessary.
ဝန်ကြီးအတွက် အကြီးတန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ထိပ်တန်းအကူအညီများ
အကြီးတန်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဝန်ကြီး၏ထိပ်တန်းအကူအညီများကို အမျိုးသားနှင့်နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူ များ၊ ဝန်ကြီးနှင့်ရင်းနှီးသောလူထုခေါင်းဆောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး အကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာများ၊ မူဝါဒများ နှင့် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစသည်တို့တွင်ဝန်ကြီးအားတိုက်ရိုက်အကြံဉာဏ်များပေးရမည်။ ထိုကျွမ်းကျင်သူများသည် ဝန် ကြီးအားလမ်းညွှန်သူများအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပြများ အနေဖြင့်လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးမည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှေ့သို့ဦးတည်သွားနိုင်မည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံ ဉာဏ်ပေးခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အဖြေရှာနိုင်ရန်ကူညီပေးရမည်။
အမြဲတမ်းအတွင်းရေးမှုး သည်ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏ အငယ်တန်းအဆင့်ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းအတွင်းရေးမှုးသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးစီးဌာနများအကြား ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကို ညှိနှိုင်းပြီး ဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ အတွင်းရေးမှုးတာဝန်များအားလုံးကို တာဝန်ယူရမည်။
ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုးများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိဦးစီးဌာနအမျိုးမျိုးကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်၊ ဌာနအသီးသီးနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်များအကြားသော်လည်းကောင်း၊ အခြားသောဝန်ကြီးဌာနများအကြား သော်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပုံ၊ ဆက်သွယ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုချောမွေ့စေရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဦးစီးဌာနမန်နေဂျာများကို ဦးစီးဌာနဒါရိုက်တာများနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးနောက် ဝန်ကြီးမှတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဦးစီးဌာန၏အရင်းအမြစ်များကို အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်း၊ ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးထံ‌တင်ပြရမည့်သတင်းအချက်အလက်များ၏ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ကိုတာဝန်ယူရမည်။
ဦးစီးဌာနအတွင်းရေးမှုးများကို ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးပြီးနောက် ဝန်ကြီးမှတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော အတွင်းရေးမှုးဌာနတာဝန်အားလုံးကို ထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများကို ဝန်ကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးများမှ တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းခံသည့်အတိုင်း ရှာဖွေရန်နှင့် ဌာနများအားလုံး ထိရောက်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက် ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် မန်နေဂျာတို့မှပေးအပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို ထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။